खाडीको सीप खेर फालेनन् जयसपुरका नासिरले, नेपालगन्जमा भित्रा्ए ‘वालपेपर’ - Nepalgunj Business
नयाँ प्रविधिको वालपेपर देखाउँदै नासिर ।
बाँके : दश वर्ष बिदेशी बिताए, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका –१६ जयसपुरका नासिर अहमद जोलाहले । तीन वर्ष मलेशिया र सात वर्ष कतारमा पसिना चुहाँउदा उनले पैसा मात्र कमाएनन् । घर फर्किदा सीप पनि लिएर आए । धेरै नेपालीहरु खाडीबाट फर्किदा पैसा मात्र लिएर आएका हुन्छन् । सीप सिकाईमा भने जहाँको त्यही रहन्छन् । तर नासिर अरु भन्दा भिन्न रहे । उनले मलेशियामा रहँदा वालपेपरको काम सिके । त्यही सीपमा पोख्त भएपछि घर फर्किएका नासिरले बिदेश नजाने कसम खाए । एघार महिना अघि त्यही बिदेशको सीप काम उपयोग गर्दै उनले नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा वालपेपर व्यापार शुरु गरे ।
‘दश वर्ष बिदेश बस्दा कमाएको पैसा घर खर्चमै सकियो । तर त्यहाँबाट सिकेको सीप मसंगै छ । खेर गएको छैन । काम लाग्यो’– नासिरले भने ‘अब कहिल्यै बिदेश नजाने गरी व्यापार शुरु गरेको छु । ’
वालपेपर घरको भित्ता चिटिक्क सजाउन प्रयोग गरिन्छ । पेन्ट भन्दा अत्यन्त आर्कषक र दिगो हुने वालपेपर नेपालगन्ज जस्ता शहरहरुमा बिस्तारै प्रयोग भइरहेको छ । नेपालगन्जका लागि नयाँ वालपेपरको प्रयोगलाई बढाउनका लागि नासिरले मार्केटिङ्गको काम पनि गरिरहेका छन् । ‘दश वर्ष बिदेश बस्दा कमाएको पैसा घर खर्चमै सकियो । तर त्यहाँबाट सिकेको सीप मसंगै छ । खेर गएको छैन । काम लाग्यो’– नासिरले भने ‘अब कहिल्यै बिदेश नजाने गरी व्यापार शुरु गरेको छु । ’ यहाँ कमाई हुँदैन भनेर घरपरिवारबाट बिदेश जान दवाव नआएको होइन, नासिरलाई । तर बिदेशमा होइन स्वदेशमै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नगएको नासिरले बताए । उनले भने,–‘ आफुसंग भएको सीप यही पनि प्रयोग गर्न सकियो भने कमाई हुन्छ भन्ने लाग्यो ।’
नेपालगन्जको ठुला ठुला होटलमा समेत उनको वालपेपर लागिसकेको छ । ‘यसप्रति चासो बढेको छ ।’–नासिरले भने,‘सबैले किन्नुभयो भने म फेरी बिदेश जान नपार्लकी ? ’
बिदेशबाट घर फर्किएको चार वर्षपछि नासिरले व्यापार शुरु गरेका हुन । व्यापार गर्दा उनले रु २ लाख मात्र लगानी गरेका थिए । त्यही सानो लगानीबाट काम सुरु गरेको ब्यापार अहिले बिस्तार माथि उकिलदै छ । तर पनि महङ्गो सटर भाडा, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनमै ठिक्क छ अहिले । वालपेपरका बारेमा अझै धेरैलाई थाहा छैन । त्यसको मार्केटिङ्ग भएकै छैन । ‘अझ धेरैलाई बुझाउन बाँकी नै छ । सबैले प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने व्यापार बढ्छ भन्ने आश छ ’– आफ्नो व्यापारप्रति आशाबादी रहेका नासिर भन्छन, ‘अहिले त ठिकठाकै छ ।’ अन्यन्त आर्कषक र आधुनिक प्रबिधिबाट उनले वालपेपर लगाउँछन् । नेपालगन्जको ठुला ठुला होटलमा समेत उनको वालपेपर लागिसकेको छ । ‘यसप्रति चासो बढेको छ ।’–नासिरले भने,‘सबैले किन्नुभयो भने म फेरी बिदेश जान नपार्लकी ? ’
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस २६, २०७५ 10:26:12 AM